Nahomby ny fitsapana ny fantsom-pantsary plastika vita amin'ny PPR - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
Andramana soa aman-tsara ny tsipika fantsom-pifandraisana Super PPR Fiber Glass
Fotoana: 2018-09-15 Hits:
FR / PP-R pipes dia fantsom-pandrosoana avo lenta vita amin'ny hafanana ambany sy ny hafainganam-pandeha amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fizotrasa manokana amin'ny alàlan'ny fitrandrahana mpiara-miasa multi-layer. Ny fantsona FR / PP-R dia karazana fantsona polypropylene vita amin'ny fibrereinforced. Ny sosona anatiny sy ivelany dia vita amin'ny PP-Rmaterial. Ny sosona antonony dia misy fampidirana fibre vera amin'ny fototry ny PP-R. Raha ampitahaina amin'ny fantsona PP-R, ny fantsom-boaloboka FR / PP-R dia manana tady fanamafisam-peo fitaratra eo afovoany, izany hoe, mifototra amin'ny fantsona PP-R mahazatra, dia manatsara ny fahamafisana, ny fandefasana hazavana ary ny hafanan'ny rivotra, ary ny fahombiazany dia avo kokoa noho ny ny an'ny pipa PP-R. Izy io dia manana ny mampiavaka ny coefficient ambany linearexpansion, izay manolo ny famerana ny fampiasa PPR tsy azo ampiasaina.
Vao tsy ela akory izay, ny JWELLMachinery's PPR / FR-PP Pipe Extrusion Line izay novokarina ho an'ny orinasam-pampiasa amerikanina, dia nahomby tamina fandrosoana tao amin'ny orinasa SHANGHAI JWELL MACHINERY. Tena mahomby tokoa ny lalan-kizorana, ny fiasan'ny tsipika famokarana dia miorina tsara sy milamina, manana vokatra madepipe miaraka amin'ny loko mitovy, mamirapiratra sy madio ary misy stratifiedprecision.
1) Manamboatra hafanana ambany sy haingam-pandeha avo lenta amin'ny alàlan'ny fizotrana manokana sy ny fitaovana ampiasaina amin'ny multi-layer co-extrusion.
2) Volavola specialscrew mifanohitra amin'ny fantsona PPR / FR-PP.
3) Famolavolana lohan'ny lohan-doha Advancedand Patant extrusion amin'ny fantsona PPR / FR-PP.
4) Famaritana mazava mialoha ny hateviny sy ny fametrahana ny fantsona.
5) Ny famatsian-drano advancedautomatika sy ny fifehezana ny rano ary ny fifehezana ny toetr'andro. Ny vokany mangatsiaka dia tsara. Ny hafainganana farany ambony dia hatramin'ny 20M / min.
6) Ny tsipika Theextrusion dia natao hiasa mandeha ho azy izay manome antoka ny azo antoka sy azo antoka.
7) Ny fandefasana ireo extruders marobe dia mitombina ary ny habaka nozahana dia kely.
8) Ny hamafin'ny vokatra dia mety hahatratra 160 SDR7.4.
Fomban'ny Sodina & Fampiharana
1,Fomban'ny Sodina & Fampiharana
1) PPR / FR-PP fantsona dia be mpampiasa amin'ny solarenergy, rafitra famokarana angovo hafanana, rafitra fanamafisana ary famatsian-drano noho ny fanerena avo lenta sy ny fanoherana ny hafanana, ny halavan'ny fandidiana maharitra, ny tanjaka sy ny fanoherana misy fiantraikany ary ny fisorohana ny fantsom-pitaterana.
2) Noho ny tanjany, PPR / FR-PPpipe dia afaka mamonjy vidin'ny injeniera marobe, ary azo antoka tanteraka ny filaminana. Noho izany, PPR / FR-PP dia manana fironana hanolo ny PPR. Izy io dia fantsona plastika sangan'asa amin'ny vanim-potoana vaovao.
HIVERINAMpanamboatra avo lenta ireo fitaovana fantsom-boasary insulated ——Sinjia Jwell Masinina
NEXTPE Air Ventilation Pipe Extrusion Line dia mihazakazaka am-pahombiazana ao amin'ny orinasa SHANGHAI JWELL MACHINERY